Naya Bikalpa | सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिन्छ - Naya Bikalpa सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिन्छ - Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७८ श्रावण ४, १२: ५५: ४९
सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन सम्बन्धी परेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट के.पी. शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । अहङ्कार र अन्तरविरोधको कारण आफ्नै पार्टीबाट सत्ताको बागडोर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको हातमा आएकोछ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसलाले ओलीलाई सत्ताबाट वहिगर्मन हुन बाध्य पारेको छ। उनी मोटर र मोटर साइकल र्यालीसँगै बालकोट पुगेर अदालत र आफ्नै पार्टीको नेताहरुमाथि खनिएका छन्।
भर्खरै सत्तासीन भएका नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार निर्माणकै प्रक्रियाका लागि परेका छन्।
पहिलो चरणमा उनले आफ्नो पार्टीको दुईजना र सहयात्री पार्टी माओवादीबाट दुईजना गरेर पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डलबाट सरकार निर्माण गरेका छन्।
यही सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा विशेष संवाददाताले काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि आगामी कदमहरु के–के हुने छन् ?
भर्खरै सरकार गठन भएको छ । मुलुकमा पहिले कोरोना महामारीलाई परास्त गर्नु छ । सु–साशन छैन । यि दुइवटै कुराको प्रत्याभूति गर्ने गरेर सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रलाई एकलौटी पारिएको थियो ।
यो बिचमा सरकार जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्याे जनताका मुद्दामा केन्द्रीत भएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यतातिर के.पी शर्मा ओलीको सरकार जान सकेको थिएन । ओली सरकारको प्राथमिकता अन्तर विरोधमा रुमलिएको थियो । यि सबै कुराहरुलाई मनन गरेर काँग्रेस नेतृत्वको सरकार सबैको विश्वास जितेर अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
याे काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हो की शेरबहादुर देउवाको सरकारको हो ?
यसलाई दुइवटै कुरा भन्न सकिन्छ । व्यक्तिको रुपमा यो शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित भएको सरकार छ र संस्थागत रुपमा हेर्ने हो भने यो नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हो ।
तर अदालतले त प्रष्ट रुपमा भनेको छ नि स्वतन्त्र सासंदहरुको नेतृत्वको सरकार हो भनेर तपाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिनिधिसभाको सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गर्छ । जब कुनै दलको स्पष्ट बहुमत हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा बन्ने सबै सरकारहरु प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको नेतृत्वमा बन्ने गर्छन र कानुनी रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा बनेको सरकार भएपनि हामी संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाति भएको हुँदा यो नेपाली काँग्रेस पार्टी नेतृत्वको सरकार पक्कै हो ।
अदालतले ह््वीप लाग्दैन भनिसकेको अवस्थामा कतिपय संविधानविद् र कानुनविद्ले यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार हो नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेकै छैन भनेर भनेका छन् नि तपाईलाई के लाग्छ ?
संविधानको धारा ७६ (२)मा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारलाई पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यकै नेतृत्वमा बन्ने गर्छ । यस अर्थमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भनेको पूर्व शर्त नै हो सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि । त्यसकारण यो पूर्व शर्तका आधारमा बनेको भएपनि त्यसभित्र हामी दलीय अभ्यासभित्र छौं ।
दलीय अभ्यास गर्दाखेरी कुनै चरणमा अदालतको भनाई अनुसार ह्वीप लागू हुन सक्दैन किनभने ह्वीपले संसदलाई अस्थिर बनाउने संसद्को अस्तित्व समाप्त हुने या सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भनेपछि स्वविवेकको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको अदालतको व्याख्या हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ तर अंक गणितमा हेर्ने हो भने तपाईहरुसँग स्पष्ट बहुमत छैन नी कसरी हुन्छ ?
हामीसँग संख्या र आधार नभएको भए शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा अदालतले निर्णय गर्दैनथ्यो । हामीसँग बहुमत छ र बहुमतको आधारमा हामी विश्वासको मत लिन्छौं ।
विश्वासको मत पाउने आधारहरु के–के हुन् ?
स्पष्ट रुपमा जसले पहिले सरकार गठनको सन्दर्भमा दस्तखत गरेका छन् । वैकल्पिक सरकार गठन दिन्छौं । विश्वास मत दिन सक्छौं त्यसकारण शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले भनेका छन् ।
ति त केही मध्यम आधार भयो सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने त्यो भन्दा बाहेक पनि अदालतको निर्णयपछि अरु राजनीतिक शक्तिहरुले पनि मुलुकमा स्थिरता हुुनपर्छ ।
लोकतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ र लोकतन्त्रको रथ चाही एउटा बाटोमा एउटा गन्तव्यतिर एउटा प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अरु राजनीतिक शक्तिहरुले पनि समर्थन गर्छन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
उसोभए माधव नेपाल समुहका २३ जना सासंदहरुले विश्वासको मत दिन्छन् त , तपाईलाई के लाग्छ ?
माधव कुमार नेपालसँग पनि अरु विकल्प छैन । विशेष गरेर अहिलेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ कि अब उहाँहरुलाई एमालेभित्र प्रवेश छैन ।
उहाँहरुलाई हामी एमालेभित्र राख्दैनौं भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ । त्यति मात्रै होइन की एमालेको स्थापित नेतृत्व र पूर्व महासचिवलाई, अध्यक्षलाई पनि यो गद्दार भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो । यो कम्युनिष्ट शब्द हो ।
यो एकदमै पार्टीमा अन्तरविरोधको बेला वा वैचारिक अन्तर विरोधको बेला अथवा गम्भीर किसिमको एक अर्कासँग असहमतिको बेला कम्युनिष्टहरुले त्यस्तो किसिमको शब्द प्रयोग गर्ने गर्छन् । ती शब्दावली उहाँहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।
त्यसकारण उहाँहरुले अदालतमा गएर विश्वासको मत दिन्छौ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो अभिव्यक्ति भन्दा टाढा बसेर अन्य अभिव्यक्ति दिनुभयो भने उहाँहरुलाई झन् कमजोर बनाउने छ र राजनीतिक रुपमा पनि त्यो परिपक्क निर्णय हुन सक्दैन ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने किन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार चलाउने ? त्यसकारण संसद्भित्र अधिकांश सदस्यहरु शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार चलाउन चाहन्छन् ।
एमाले एक भयो भने ओली झन् शक्तिशाली बन्ने अवस्था आउँछ र माधव कुमार नेपाल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारको स्थायित्व कसरी हुन्छ अनि मुलुक फेरी निर्वाचनमानै जान्छ होइन र ?
तपाईले भन्नुभएको कुरा पनि सही हो की के.पी शर्मा ओली नेकपा एमाले एकै ठाउँमा आयो भने उहाँ बलियो बन्नुहुन्छ र उहाँहरुसँग १२१ सिट हुन्छ भन्ने कुरा त देखिएकै छ ।
सरकार बनाउनको लागि १३६ सिट चाहिन्छ । त्यो आफै.मा धेरै ठूलो संख्या हो । प्रतिपक्ष दलको लागि पनि त्यो धेरै ठूलो संख्या हो । जसपा पार्टी पनि जोडियो भनेदेखी उहाँहरु बहुमतको धेरै नजिक भएको अवस्था हो तर हामीलाई लाग्दैन कि नेकपा एमाले भित्रको अन्तर विरोध यतिकैमा समाप्त हुँदैछ ।
अन्तर विरोध सैद्धान्तिक कारणले पनि भएको छ । व्यक्तिगत कारणले पनि विरोध भएको छ । महत्वकाँक्षी कारणले पनि विरोध भएको छ । अह्मताका कारणले पनि नेकपा एमालेभित्र अन्तर विरोध भएको छ । त्यसकारण एक अर्कालाई पुरै नजरअन्दाज गरेर एकिकरण हुन सक्दैन । पार्टीको व्यवस्थापन निकै जटिल र कठिन छ । अहिलेसम्म उनीहरु सहमतिको मुद्दामा पुग्न सकेका छैनन् ।
विशेष गरेर १० बुँदे सहमति जुन उहाँहरुले गर्नुभएको थियो, त्यसपछि पनि अदालतको निर्णय आएको छ र अदालतको निर्णय आउँदाखेरी उहाँहरुले स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको छ कि अदालतको निर्णय हामी मान्छौं भनेर भन्नुभएको अवस्था हो र यो स्थितिलाई लिएर के.पी शर्मा ओलीले असहिष्णुता देखाउनु भएको छ । यसरी देखाइएको असहिष्णुलाई माधव कुमार नेपालले सजिलै स्वीकार गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले कति दिनभित्र विश्वासको मत लिनुहुन्छ त बताइदिनुस् ?
हामीसँग ३० दिनको समय छ । विश्वासको मत लिदाखेरी हामीले परिस्थिति परिपक्क भइसकेपछि सबै दलहरुसँग वार्ता, संवाद र छलफल गरिसकेपछि विश्वासको मत लिन्छौं ।
त्यसोभए मन्त्रिमण्डल विस्तार पछि विश्वासको मत लिनुहुन्छ होला होइन त ?
मन्त्रिमण्डलबाट केही अरु शक्तिहरु पनि सामेल गर्ने कुरा छ र केही पार्टीहरुले संस्थागत रुपमा हामी सरकारमा जानका लागि संस्थागत निर्णय चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँहरुको बैठक छलफल पछि र मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड पछि विभिन्न दलहरुकोबीचमा वार्ता गरेर मात्रै विश्वास मत लिने काम हुन्छ ।
त्यसोभए अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस पार्टीको महाधिवेशन हुने सम्भावना कति छ ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन हुन्न भनेर भन्न पनि गाह्रो छ र गर्न पनि गाह्रो छ । कोरोना महामारीको बेलामा केही जटिलता कठिनाइहरु भएको बेलामा पनि यो महाधिवेशन हुन्छ हुन्छ गर्नैपर्छ भन्नेजस्ता कुरा लिएर अगाडि बढ्दाखेरी मान्छेहरुलाई कताकता गाह्रो अप्ठ्यारो भएको जस्तो देखिएको छ ।
मैले पटक पटक आफु व्यक्तिगत तहमा भन्ने गरेको छु कि अहिले क्रियाशिल सदस्यता विवादको हामीले छिनोफानो गर्न सकेका छैनौ । कतिपय ठाउँमा जिल्लाबाट सर्वसम्मत रुपमा आएका नामहरुमा पनि छानविन समितिमा उजुरीको आह्वान गरेपछि केही विवादहरु देखिएका छन् ।
विवादहरुको निराकरण गर्ने केही स्पष्ट मापदण्डहरु केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेपनि त्यसलाई सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने जस्ता कुराले त्यसलाई ज्यादा जटिल बनाएको छ ।
त्यो क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले त्यसमा साथीहरु गम्भीर रुपमा काम गरिरहनुभएको छ होला । तर क्रियाशिल सदस्यता सम्बन्धी विवाद अहिले टुङ्एिको छैन । अरु पार्टीबाट आएका सदस्यहरुको संस्थाको विवादमा धेरै ज्यादा काम हुन सकेको अवस्था छैन् ।
२०७८ श्रावण ४, १२: ५५: ४९